जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमार्फत मुलुकको विकास गर्नुपर्छ : शशांक - Digital Khabar
२४ असाेज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धादिङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिले दसैँका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक नेपालले सोही चिजलाई उपयोग गरेर विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
महामन्त्री डा. कोइरालाले कांग्रेसभित्रको गुटको अन्त्यका लागि आफूले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा उमेदवारी दिन लागेको बताए । “कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनका लागि मेरो सभापति पदमा उमेदवारी रहन्छ,” डा. कोइरालाले भने ।
कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाले पार्टीलाई नयाँ सोच र दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । “कांग्रेसले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र आदर्शविना कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन,” उनले भने । जनतालाई कांग्रेसप्रति ठूलो भरोसा र विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस धादिङका पूर्वसभापति एवं पूर्वसांसद रामनाथ अधिकारीले पार्टीभित्र संस्कारको राजनीति हराउँदै गएको बताए । पार्टीको सिद्धान्त र विचारविपरीत कांग्रेस अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो ।
सम्पर्क समितिका सभापति ईन्द्रप्रसाद काप्रीले पार्टीभित्र देखिएको गुट–उपगुटको अन्त्य नभएसम्म पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्न नसक्ने बताए ।